မျိုးဆက်သစ်အဆိုတော်တွေကို အကြံပေးလိုက်တဲ့ အဆိုတော်Rဇာနည်
14 Nov 2017 . 1:00 PM
သီချင်းတွေကို အပီအပြင်နဲ့အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့သီိဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်Rဇာနည် လက်ရှိဂီတလောကထဲမှာ အသစ်ပေါ်လာတဲ့ မျိုးဆက်သစ်အဆိုတော်တွေကို အခုလိုပဲအကြံပေးပြောပြခဲ့ပါတယ်။“အစ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်း အဆိုပြိုင်ပွဲတွေကနေအဆိုတော်ဖြစ်လာတယ်။ အားလုံးကိုအားပေးတယ်။ ကြိုဆိုတယ်။ ကုသိုလ်ကံအားကောင်းတယ်။ စန်းရှိလို့ ပရိသတ်တွေအားပေးလက်ခံကြတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပြီး ဘဝမမေ့ဖို အဆိုတော်အချင်းချင်းလေးစားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ အဲ့ဒါလေးပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်” လို့ အဆိုတော် Rဇာနည်က ဆိုပါတယ်။
အဆိုတော် Rဇာနည်ထွက်ရှိထားတဲ့ ကမ္ဘာသားတေးစီးရီးအယ်ဘမ်လ်ကလည်း ပရိသတ်တွေအားပေး မှုကိုရရှိထားပြီး နောက်သီချင်းခွေအတွက်လည်း တေးသီချင်းတွေစတင်စုနေတယ်လို့လည်းသိရပါ တယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ အင်တာနက်က သီချင်းတွေကိုဒေါင်းလော့လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဝါရင့်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့အမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ “သီချင်းတွေ အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် ဒေါင်းလော့လင့်ခ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် ဒါကလဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဈေးကွက်အရ ခေတ်အရစီးမျောနေတာဆိုတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပြောလို့မရဘူးလေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဒီခွေရောင်းတဲ့ကိစ္စက နောက်ဆုံးဆိုင်တွေပါပျောက်သွားမယ်၊ ဥပမာ အင်္ဂလန်မှာ မြို့လယ်ကောင်လောက်မှာရှိတဲ့ Apple မြူးဇစ်စီဒီဆိုင်ကြီးတွေတောင်ပိတ်သွားပြီ၊ အဲဒါမျိုးက ကိုယ့်ဆီမှမှာဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ကမ္ဘာနဲ့အဝှမ်းမှာ ဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ ပြောရခက်ပါတယ်။အဆိုတော်တွေဘက်ကတော့ ကြိုက်တာရော မကြိုက်တာရော ကြားရမှာပေါ့၊ နောက်တော့လည်း အချိန်ကကုစားသွားမှာပါ”လို့ အဆိုတော်Rဇာနည်ကပြောပါတယ်။
မြိုးဆကျသဈအဆိုတျောတှကေို အကွံပေးလိုကျတဲ့ အဆိုတျောRဇာနညျ
သီခငျြးတှကေို အပီအပွငျနဲ့အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့သီဆိုတတျတဲ့ အဆိုတျောRဇာနညျ လကျရှိဂီတလောကထဲမှာ အသဈပျေါလာတဲ့ မြိုးဆကျသဈအဆိုတျောတှကေို အခုလိုပဲအကွံပေးပွောပွခဲ့ပါတယျ။“အဈကိုကိုယျတိုငျလညျး အဆိုပွိုငျပှဲတှကေနအေဆိုတျောဖွဈလာတယျ။ အားလုံးကိုအားပေးတယျ။ ကွိုဆိုတယျ။ ကုသိုလျကံအားကောငျးတယျ။ စနျးရှိလို့ ပရိသတျတှအေားပေးလကျခံကွတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ရငျလညျး ကိုယျ့ဘဝကိုတနျဖိုးထားပွီး ဘဝမမဖေို့ အဆိုတျောအခငျြးခငျြးလေးစားဖို့လညျးလိုပါတယျ။ အဲ့ဒါလေးပဲအကွံပေးခငျြပါတယျ” လို့ အဆိုတျော Rဇာနညျက ဆိုပါတယျ။
အဆိုတျော Rဇာနညျထှကျရှိထားတဲ့ ကမ်ဘာသားတေးစီးရီးအယျဘမျလျကလညျး ပရိသတျတှအေားပေး မှုကိုရရှိထားပွီး နောကျသီခငျြးခှအေတှကျလညျး တေးသီခငျြးတှစေတငျစုနတေယျလို့လညျးသိရပါ တယျ။ ခတျေရစေီးကွောငျးတဈခုလိုဖွဈနတေဲ့ အငျတာနကျက သီခငျြးတှကေိုဒေါငျးလော့လုပျတာနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး ဝါရငျ့အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ သူ့ရဲ့အမွငျတှနေဲ့ပတျသကျလို့ “သီခငျြးတှေ အငျတာနကျကတဈဆငျ့ ဒေါငျးလော့လငျ့ချပေးတာနဲ့ပတျသကျပွီးပွောရရငျ ဒါကလဲလကျရှိဖွဈနတေဲ့ မွနျမာနိုငျငံကဈေးကှကျအရ ခတျေအရစီးမြောနတောဆိုတော့ ကိုယျတဈယောကျတညျးပွောလို့မရဘူးလေ တိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ ဒီခှရေောငျးတဲ့ကိစ်စက နောကျဆုံးဆိုငျတှပေါပြောကျသှားမယျ၊ ဥပမာ အင်ျဂလနျမှာ မွို့လယျကောငျလောကျမှာရှိတဲ့ Apple မွူးဇဈစီဒီဆိုငျကွီးတှတေောငျပိတျသှားပွီ၊ အဲဒါမြိုးက ကိုယျ့ဆီမှမှာဖွဈနတောမြိုးမဟုတျပါဘူး ကမ်ဘာနဲ့အဝှမျးမှာ ဖွဈနကွေတာဆိုတော့ ပွောရခကျပါတယျ။အဆိုတျောတှဘေကျကတော့ ကွိုကျတာရော မကွိုကျတာရော ကွားရမှာပေါ့၊ နောကျတော့လညျး အခြိနျကကုစားသှားမှာပါ”လို့ အဆိုတျောRဇာနညျကပွောပါတယျ။
by Min Than Htike .3weeks ago